Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Detox an-trano ho an'ny fiankinan-doha amin'ny alikaola
Tsy misy isalasalana fa ilaina ny mandresy ny fiankinan-doha izay manimba ny fiainana sy manimba ny drafitra rehetra. Na izany aza, indraindray, sarotra be ny miditra amin'ny toeram-pitsaboana miaraka amin'ireo olon-tsy lavitra ny tontolo iainana ao an-trano sy ao an-trano. Soa ihany fa misy programa famerenana amin'ny laoniny, izay manambatra ny herin'ny fanampiana ara-pianakaviana sy ny fanampiana matihanina.
Amin'ny ady amin'ny fiankinan-doha dia mety ho an'ny maro ny detox an-trano.
Izy io dia azo atao amin'ny alàlan'ny rafitra detox alikaola ao an-trano izay misy ny fanafody voatondro sy ny fakan-kevitra amin'ny telefaona miaraka amin'ireo manam-pahaizana momba ny klinika.
Ny GP, ny mpitsabo ary ny mpitsabo mpanampy, dia azo idirana 24/7 hanome torolàlana, mialoha, tolo-kevitra, na fanohanana vitsivitsy fotsiny.
Ny safidin'ny detox toaka ao an-trano dia mety tanteraka hiadiana amin'ny fiankinan-doha amin'ny fisorohana ny fianjerana amin'ny fiainana ara-tsosialy.
Peculiarities an'ny programa Detox an-trano
Ilaina ny mandray an-tsaina fa ny fanarenana trano dia tsy mety amin'ny marary tsirairay. Alohan'ny hanombohan'ny famerenana amin'ny laoniny, ny manam-pahaizana manokana dia tsy maintsy manao fanadihadiana, manadihady famakafakana ary manombatombana toe-javatra iray manontolo.
Amin'izay ihany, raha tsy faritan'ny manam-pahaizana ho zava-mahadomelina ilay fiankinan-doha dia azo atao ny manome detox any an-trano.
Iray amin'ireo toeram-pitsaboana rehab tsara indrindra any UK Serenity ( https://www.rehabclinic.org.uk/locations/drug-alcohol-rehab-clinic-london/ ) dia manolotra ireo karazana rehab alikaola - ny marary an-trano sy ny mpitsabo (detox an-trano).
Ireo ivon-toeran'ireo fiankinan-doha amin'ny serenity dia mitondra rafitra detox toaka ao an-trano, izay ao anatin'izany ny fandraisana fanafody sy fitsaboana amin'ny telefaona miaraka amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny klinika.
Aza mieritreritra fa mijanona irery ilay marary ao an-trano. Ireo manam-pahaizana momba ny Serenity, toy ny GP, ny therapists ary ny mpitsabo mpanampy, dia azo idirana 24/7 hanome torolàlana, mialoha, tolo-kevitra, na fanohanana vitsivitsy fotsiny. Ankoatr'izay, mifehy ny dingana rehetra amin'ny programa izy ireo ary manara-maso ny fandrosoana.
Maninona ianao no tokony hisafidy programa fandaharana amin'ny fahasalamana
Tombony amin'ny famerenanana detox an-trano Serenity:
Fakan-kevitra momba ny telefaona sy fotoam-pitsaboana
Drafitra momba ny sakafo sy ny sakafo
Fahazoana kilasy master an'ny manam-pahaizana manokana momba ny fiankinan-doha amin'ny alikaola
Zava-mahadomelina hitantanana ny soritr'aretin'ny fisintahana
Ankoatr'izay, diniho fa ny famerenana amin'ny laoniny trano dia mora kokoa noho ny fitsaboana amin'ny marary.
Mazava ho azy, ny detox an-trano dia midika ho avo lenta amin'ny fahaleovan-tena sy ny andraikitry ny marary. Raha misy fisalasalana momba ny feon'ny fieritreretanao, dia mety ny manomboka amin'ny rehab marary ary avy eo mifindra tsikelikely amin'ny fitsaboana lavitra.